Tusaalooyinka u-qalmitaanka maalgelinta deeqda
Waa maxay Sanduuqa Dhibaatooyinka ee Ganacsi?
Sanduuqa Sanduuqa Dhibaatada Ganacsi ee Mulkiilaha (Sanduuqa) waxaa loogu talagalay mulkiile yaryar, shaqsi gaar ah iyo milkiileyaal milkiil wadaag ah oo hoos u dhigay kirada kiraystayaasha iyaga oo hoos imanaya Qorshaha Kaalmaynta Kireysiga Ganacsi (CTRS).
Iyada oo loo marayo Sanduuqa, Dowladda Fiktooriya waxay ku siineysaa deeqo ugu yaraan $ 3,000 kiro kasta. Kuwani waxaa loogu talagalay milkiileyaasha guryaha oo ay ku adag tahay dhaqaale ahaan sababo la xiriira kirooyinka hoose ee ay ku soo galaan CTRS.
Xaq ma u leeyahay deeqda?
Xaq Baad u leedahay haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha hoose:
Waxaad tahay shaqsi gaar ah (yacni qof) ama milkiileyaal wada jir ah oo shaqsiyaad gaar ah leh. Xaq uma lihid haddii aad milkiile ka tahay Hay'adda Trust, Sanduuqa Superannuation ee Is-Maareeya, ama haay'ad kale oo isku-dhafan.
Adigu waxaad tahay mulkiilaha kaliya, ama milkiilaha wadajirka ah ee shakhsiyaad kale oo gaar ah, oo ah hanti ganacsi oo kiro ah. Wadarta guud ee dhulkaaga cashuurta laga qaadayo waxay kayartahay $ 1 milyan sida lagu muujiyey Qiimaynta Canshuuraha Berriga ee 2020 ama Ogaysiiska Qiimaha Dawlada Hoose ee 2019-20. Wadarta marinka lahaanshaha ee guud ee $ 1 milyan waxaa loogu talagalay dhammaan guryaha laakiin maahan meesha aad degan tahay ee ugu muhiimsan (halka aad inta badan ku nooshahay).
Hantida ganacsigu waxay ku taal Fiktooriya waxaana kireystay kireyste u qalma ka saarista kirada ee hoos timaadda Qorshaha Kireynta Kireysiga Ganacsi(CTRS).
Waxaad u aragtaa inay adag tahay, ama dhaqaale ahaan way kugu adag tahay, maxaa yeelay waxaad hoos u dhigtay kirada kirayste / yaashaada, ee dalbaday gargaar kiro oo hoos yimaada CTRS.
Maxay Tahay Sababta Deeqda Loo Siiyo Shaqsiyaadka Iyo Milkiilayaasha Wadajirka Ah?
Qaar badan oo mulkiileyaal yaryar oo gaar loo leeyahay ayaa ku tiirsan dakhliga kirada si ay u daboosho kharashyada nolosha. Waxay aad ugu nugul yihiin dhibaatada dhaqaale. Way ka awood yar yihiin inay la soo baxaan saamaynta maaliyadeed ee kirada oo hoos u dhigta CTRS.
Hay’adaha Midoobay Waxay leeyihiin difaac hoos yimaada Commonwealth (Dawlad Wadaag) marka lo eego dhanka musalafnimada. Guud Ahaan waxay leeyihiin ilo dhaqaale oo ka badan milkiilayaasha yaryar ee gaarka loo leeyahay. Sababtaas awgeed, iyagu ma daboolna.
Sidee ku ogaadaa haddii wadarta hantidayda la cashuuri karo ay yar tahay $1 milyan?
Ogeysiiskaaga Qiimeynta Canshuuraha Berriga ee 2020 wuxuu sheegi doonaa qiimaha guud ee dhulka lagaa cashuuro.
Haddii aadan bixin canshuurta berriga maxaa yeelay wadarta guud ee dhulka lagaa cashuurayo waxay ka yar yihiin $ 250,000, ka hel Qiimaha Goobta ogeysiiska golahaaga 2019-20 ama ogeysiiska heerarka degmada.
Ma dalban karaa deeqdan haddii aanan ku noolayn Fiktooriya laakiin aan guryaha ku haysto gudaha Fiktooriya oo ay leeyihiin kireystayaal u qalma CTRS?
Haa. Uma baahnid inaad caddeyso degenaanshaha si aad u dalbato deeqdan.
Meeshayda ugu muhiimsan ee aan degganahay (meesha aad inta badan ku nooshahay) miyaa lagu daray dhulalka dhulka laga cashuuro?
Maya. Meesha ugu muhiimsan ee aad degantahay kuma jiraan.
Immisa ayaan ubaahanahay inaan hoos u dhigo kirada si aan u codsado deeqda?
Mulkiilayaasha guryaha waa inay hoos u dhigeen kirada ugu yaraan boqolkiiba 30 wadarta kirada. Nus ama ka badan tan waa inay ahaato ka dhaafid muddo saddex bilood ah ama ka badan . Tani waxay noqon kartaa kahor ama kadib bilowga sanduuqa 21 Ogosto 2020.
Mulkiileyaashu waxay sheegan karaan ka-dhaafitaan kiro ah oo dhacay seddexdii bilood ee ka horreysay 21 Ogosto 2020. Waxay kaloo dalban karaan ka-dhaafitaan kiro oo mustaqbalka ah oo lagula heshiiyey kiraystaha. Kuwani waxay u baahan yihiin inay la socdaan xeerarka. Tani waxay ka dhigan tahay inay qasab tahay inay hoos u dhigeen kirada ugu yaraan boqolkiiba 30 wadarta kirada. Nus ama ka badan tan waa inay noqosho ahaan u dhaafaan seddex bilood ama ka badan ilaa 31 Diseembar 2020.
Ma dalban karaa deeq haddii aan bixiyo dib-u-kireysi buuxa (kirada waa in la siiyaa hadhow) kireysteyga?
Maya. Kaliya dhaafitaanka kirada ayaa la tixgelin doonaa marka la xisaabinayo qaddarka deeqda ee Sanduuqa. Dib u dhigista kirada laguma dari doono. Sababtu waxay tahay waa in hadhow laga siiyo milkiilaha guriga.
Kawaran haddii kirada horay looga wada hadlay aysan hooseyn oo ay u qalanto sanduuqan?
Haddii heshiis horey u jiray oo dhaafaya 21 Ogosto 2020, waxaad u baahan doontaa inaad dib u eegto heshiiskan. Heshiiska cusub wuxuu u baahan doonaa inuu u hoggaansamo xeerarka sanduuqa sida kor ku xusan. Waxaad u baahan doontaa inaad tan ku muujiso arjiga.
Guddiga Ganacsatada Yaryar ee Fiktooriya wuxuu leeyahay dhexdhexaadin bilaash ah oo ka caawin karta wixii khilaaf ah ee u dhexeeya mulkiilayaasha guryaha iyo kiraystayaasha. Tani waxay kaa caawin kartaa helitaanka natiijo cadaalad ah.
Milkiiluhu ma yareyn karaa kirada in ka badan hal kireysi oo u qalma CTRS wuxuu dalban karaa wax ka badan hal deeq?
Haa. Haddii mulkiiluhu uu buuxiyo dhammaan shuruudaha kireyste kasta, waxay dalban karaan in ka badan hal $ 3,000 oo deeq ah. Codsaduhu wuxuu codsan karaa hal mar oo keliya sanduuqa.
Haddii codsaduhu leeyahay wax kabadan hal hanti ganacsi, waa inay ku dalbadaan dhammaan guryaha hal codsi. Tani waa tan iyo inta wadarta hantidooda dhul ee canshuur laga qaadi karo, oo aan ku jirin meesha ugu muhiimsan ee ay degan yihiin, ay ka hooseeyaan $ 1 milyan.
Tusaale ahaan, haddii milkiile guri uu hoos u dhigay kirada seddex guri oo kala duwan waxay dalban karaan ilaa $ 3,000 kiro kasta oo ku jira hal codsi oo deeq ah. Mid kasta oo ka mid ah kiraystayaasha guryaha waa inay u-qalmaan gargaarka kireynta ee hoos yimaada CTRS. Wadarta dhulka milkiyadiisa la canshuuri karo waa inuu ka hooseeyaa $ 1million.
Deeqda ma loo heli karaa mulkiilayaasha guryaha leh?
Haa. Mulkiil guri ku leh qeyb dan ah ayaa codsan kara. Waa inay weli haystaan kirayste buuxiya shuruudaha CTRS. Hantiileyaasha waxay dalban karaan kaalmo u dhiganta danta ay ka leeyihiin dhismaha.
Tusaale ahaan, milkiilaha guriga oo leh boqolkiiba 25 saamiga dhismaha kaasoo hoos u dhiga kirada kiraystaha ee hoos yimaada CTRS, wuxuu dalban karaa ilaa $ 750. Tani waa 25 boqolkiiba $ 3,000. Milkiilayaasha kale sidoo kale way dalban karaan qaybtooda haddii ay buuxiyaan shuruudaha.
Inta ay hantidu u qalanto saamayn kuma yeelanayso qayb kasta milkiilaha xaq u lahaanshihiisa deeqda haddii dhulalkooda shakhsiyadeed ee la cashuurayo ay ka hooseeyaan $ 1 milyan qiimaynta goobta Xafiiska Dakhliga Gobolka.
Xaaskeyga iyo aniga waxaan wada leenahay milkiile ganacsi. Kireystahayagu xaq buu u leeyahay gargaarka kirada ee hoos yimaada CTRS. Ma ku dhejin karnaa codsi wadajir ah (wada dalban karnaa) hantidaas?
Maya. Milkiile kasta oo wadajir ah oo buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka waa inuu galiyaa codsi gooni ah danaha ay ka leeyihiin dhismaha. Qadarka deeqda ayaa la mid noqon doonta codsade kasta xiisaha uu u qabo guriga.
Milkiiluhu ma ka heli karaa wax kabadan hal deeq hal kireysi u-qalma CTRS?
Maya. Kaliya hal deeq ayaa loo heli karaa danta mulkiilaha ee kireysi kasta oo u-qalma CTRS.
Kireysteygu kuma heli karo gargaar kiro oo hoos yimaada CTRS. Weli ma dalban karaa deeqdan?
Maya. Kiraystahaagu waa inuu awood u yeesho inuu ku helo gargaarka kirada hoosta CTRS.
Sideen ku ogaadaa haddii kiraystayaashaydu xaq u leedahay gargaarka kirada ee CTRS?
Kireyste u qalma CTRS waa midka:
Waxay leedahay wareejin sanadle ah oo ka yar $ 50 milyan
Uu lumiyay wareejintiisa boqolkiiba 30 ama in ka badan, iyo
Waa qayb ka mid ah nidaamka lacag-bixinta ee 'JobKeeper Payment' ee Dawlada Dhexe.
Sideen ku cadeeyaa in yareynta kirada ay dhibaato igu keentay?
Codsade kastaa wuxuu u baahan doonaa inuu muujiyo taas, maxaa yeelay waxay siiyeen kireynta kireystayaasha u qalma, waxay la kulmayaan, ama la kulmi doonaan, dhaqaale xumo. Codsadeyaashu waxay u baahan doonaan inay muujiyaan inay dhibaato kala kulmeen bixinta qarashyada dibadda ama kharashka nolosha, ama bixinta deynta.
Talaabooyin noocee ah ayey qaadi karaan kireystayaasha iyo milkiileyaasha guryaha si loo xaliyo arrimaha kireysiga?
Haddii kireyste ganacsi dhibaato ka haysato bixinta kirada sababtoo ah cudurka faafa ee loo yaqaan 'coronavirus' (COVID-19), guddiga ganacsiga yaryar ee Victoria wuxuu ku talinayaa
kiraystayaasha waxay sii wadaan bixinta wixii ay awoodaan
milkiileyaasha guryaha ayaa ka shaqeeya xaaladdooda dhaqaale
kireystayaasha iyo milkiileyaasha guryaha labadaba way wada hadlaan si ay isugu dayaan una gaaraan heshiis ku saabsan ka bixinta kirada.
Kawaran haddii kireystayaasha iyo milkiileyaashu aysan awoodin inay ku heshiiyaan kirada hoose ee waafaqsan xeerarka?
Guddiga Fiktooriya ee Ganacsiga Yaryar (VSBC) wuxuu leeyahay adeegyo dhexdhexaadin iyo xallinta khilaafaadka oo bilaash ah. Dhinacyadu waxay caawimaad ka heli karaan adeegyadan.
Waxaad ka dalban kartaa dhexdhexaadin bilaash ah VSBC si loo xaliyo khilaafka kiradaada. Markaad codsaneysid, hubi inaad kujirto nuqul kiradaada.
Haddii aadan heshiin karin, waxaad dalban kartaa Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) xal.
Ma La ii turjumi karaa macluumaadka dalabka?
Codsiyada waa in lagu soo gudbiyaa Ingiriis. Qalab la tarjumay oo lagu taageerayo codsiyada ayaa dhowaan la heli doonaa.
Ku noqo Bogga Maalgelinta Dhibaatooyinka Milkiilaha Ganacsi
Mulkiile Kali ah
Kate waxay leedahay hal guri oo qiimihiisu yahay wax kayar $ 1 milyan. Waxay leedahay kirayste, Angelo, oo codsatay gargaar kiro oo hoos yimaada CTRS.
Kahor ama kadib ku dhawaaqida sanduuqa, Kate waxay siisay Angelo kiro gargaar ah $ 10,000 muddo seddex bilood ah. Ugu yaraan kalabar ($ 5,000) waxay ahayd ka-dhaafitaan.
Kate waxay heli kartaa lacag dhan illaa $ 3,000 haddii ay buuxiso dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka.
Kate kuma samayn karto codsiyo dheeri ah kireysigaan.
Thao waxay leedahay hanti. Wadarta qiimaha goobta ayaa ka yar $ 1 milyan. Hantida Thao waxay leedahay laba kiraysi. Labaduba waxay buuxiyaan shuruudaha CTRS.
Ka dib markii lagu dhawaaqay sanduuqa, Thao wuxuu siiyay labada kireysteyaal kiro ah $ 10,000 midkiiba seddex bilood. Uguyaraan ($ 5,000 midkiiba) wuxuu ahaa ka-dhaafitaan.
Thao waxay heli kartaa laba lacagood oo kor u dhaafaya $ 3,000 (mid kiro kasta ah - wadar ahaan $ 6,000) haddii uu buuxiyo dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka.
Thao ma sameyn karto wax codsiyo dheeri ah labada kiro midkood.
Nick wuxuu leeyahay laba guri. Wadajir ahaan, waxay leeyihiin qiimaha goobta oo ka yar $ 1 milyan. Kaliya mid kamid ah guryaha Nick ayaa leh kireysi buuxiya shuruudaha CTRS.
Kahor ama ka dambeynta ku dhawaaqida sanduuqa, Nick wuxuu kireystaha kireystaha hoos u dhigay $ 10,000 muddo saddex bilood ah. Ugu yaraan kalabar ($ 5,000) waxay ahayd ka-dhaafitaan.
Nick wuxuu heli karaa ilaa $ 3,000 haddii uu buuxiyo dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka.
Nick wax codsiyo dheeri ah kuma sameyn karo kireysigan.
Milkiilayaal badan (in ka badan)
Laba codsadeyaal ayaa leh 50 boqolkiiba dulsaar hal guri oo leh qiime goobta oo kayar $ 1 milyan. Waxay leedahay kiraysi buuxiya shuruudaha CTRS.
Kahor ama kadib ku dhawaaqida sanduuqa, codsadayaashu waxay siiyeen kireystaha kireynta $ 10,000 in ka badan seddex bilood. Uguyaraan ($ 5,000) wuxuu ahaa ka-dhaafitaan. Codsadeyaashu waa inay u sameeyaan codsiyo shaqsiyeed sanduuqa.
Hal deeq $ 3,000 ayaa la bixin doonaa. Waa loo kala qeybin doonaa milkiilayaasha ($ 1,500 midkiiba) illaa iyo inta ay ka soo baxayaan shuruudaha u-qalmitaanka.
Midkoodna codsadaha ma sameyn karo wax codsiyo dheeri ah kireysigaan.
Laba codsade, Codsade A iyo Codsade B, waxay leeyihiin 50 boqolkiiba dan kasta oo ka mid ah hal guri. Hantidu waxay leedahay qiimo goobta wax kayar $ 1 milyan iyo kireysi buuxiya shuruudaha CTRS.
Kahor ama ka dib ku dhawaaqida Sanduuqa, codsadayaashu waxay siiyeen kireystaha kireynta $ 10,000 in ka badan saddex bilood. Ugu yaraan kalabar ($ 5,000) waxay ahayd ka-dhaafitaan.
Codsadaha A wuxuu la halgamayaa dhaqaale ahaan taasoo ka dhalatay yareynta kirada, laakiin Codsade B ma yeelo.
Hal deeq ayaa la siinayaa Codsadaha A, haddii ay buuxiyaan dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka. Qaddarku wuxuu u dhigmaa danaha codsadaha A ee dhismaha, xaaladdan $1,500.
Codsade A ma sameyn karo codsi kale oo kireystan ah.
Codsade B xaq uma laha deeq.